भोट बैंकले थला परेको कर्णालीको खाद्य कार्यक्रम - JagaranPost
Home/प्रदेश ६/भोट बैंकले थला परेको कर्णालीको खाद्य कार्यक्रम
डा. अरुणा उप्रेती –
जुन नेता तथा राजनीतिक दलले बढी चामल वितरण गर्न सक्यो, दुर्गम क्षेत्रका जनताको भोट उसैले पाउने अवस्था सिर्जना भयो । भोट पाउनकै लागि नभएको भोकमरीको समस्यालाई नेताले नै भोकमरीमा परिणत गरिदिएका हुन् । कर्णालीमा कहाँ भोकमरीको समस्या छ ? म त्यहाँ धेरैपटक गएकी छु, स्थानीय खाद्यान्नलाई प्रयोग गर्ने हो भने कर्णालीका कुनै पनि ठाउँमा भोकमरी छैन । त्यहाँ आलु, सिमी, कोदो, फापरजस्ता पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध छन् । भोकमरीको समस्या त नेताले कृत्रिम रूपमा बनाएका हुन् । यो नितान्त हल्ला मात्रै हो । चामलसँग भोट साट्ने प्रवृत्ति भएका कारण नेपालमा भोकमरीको हल्ला फिँजाइएको हो ।
म नेपालका विभिन्न दुर्गमक्षेत्रमा विभिन्न अभियान लिएर गइ नै रहेकी हुन्छु । त्यतिवेला म केही समय त्यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गरेर बिताउँछु । कुराकानीका क्रममा त्यहाँका मानिसले भन्ने गर्छन्– भात खाने बानीले गर्दा आजकल हामीलाई कोदो, फापर खान मन लाग्दैन ।
उनीहरूलाई भात खाने बानीले यसरी आक्रान्त पारेको छ कि, उनीहरू कोदो, फापरजस्ता अन्नबाली उब्जाउनै चाहँदैनन् । यता काठमाडौंमा कोदो, फापरजस्ता खाद्यान्न प्रतिकेजी २–३ सय रूपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ भने उता उनीहरू त्यस्ता खानेकुरा खान चाहँदैनन् । सेतो चामलको भातले उनीहरूको बानी नै बिग्रिएको छ ।
सेतो चामलको भात खान थालेपछि मानिसलाई पर्याप्त मात्रामा पोषकतत्वको अभाव हुन्छ । यसका कारण कुपोषणको समस्या आउँछ । कुपोषणका कारण मानिसले आफ्ना दैनिक गतिविधि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन । यसले मानवस्वास्थ्यमा विभिन्नप्रकारका समस्या निम्त्याउँछ ।
नेपाल सरकार, विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायतले देशका दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई चामल वितरण गर्ने काम गर्छन् । उनीहरूले त्यहाँका जनतालाई कोदो, फापरजस्ता पोषणयुक्त खाद्यान्न वितरण गरेको भए त हुन्थ्यो नि ! पहिलेदेखि नै चलिआएको चामल वितरणको परम्परालाई राजनीतिज्ञले भोट पाउने साधन बनाएका छन् । जुन नेता तथा राजनीतिक दलले बढी चामल वितरण गर्न सक्यो, दुर्गम क्षेत्रका जनताको भोट उसैले पाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
जिराको प्रयोग: मोटोपना घटाऊने देखि पाचन प्रक्रियाको सन्तुलनसम्म